पानीको चाप रिड्यूसर - यसले कसरी काम गर्दछ? Clean कसरी सफा गर्ने? Set कसरी सेट गर्ने?
पानीको चाप रिड्यूसर, फिल्टर र दबाव गेजको साथ नियमन। दबाव परिवर्तनहरू पानी पानी प्रणालीमा देखा पर्ने प्रायः अरूहरू बीचमा, गलत डिजाइन गरिएको पानी प्रणालीबाट वा रातमा घट्ने क्रममा, जब पानीको कम सेवनले पाइपमा यसको चाप बढाउँदछ, जसले प्रणाली र जडित उपकरणहरूलाई बिगार्न सक्छ र प्रयोगकर्तालाई अनावश्यक लागतमा पर्दाफास गर्दछ।
पानीको चाप रिडुसर स्थापना गर्दै आपूर्ति दबावलाई कम गर्छ कि धेरै उच्च छ, प्रणाली प्रेशरलाई स्थिर राख्दछ, इनलेट प्रेशरको उतार चढावमा पनि पानीलाई बचाउन मद्दत गर्दछ पानीको हथौडाको जोखिम हटाउन र आवाज कम गर्न र पानी प्रणालीको सञ्चालनको क्रममा उत्पन्न हुने आवाज।
पानीको चाप नियामकहरु पछाडि माउन्ट छन् पानी मिटर i पानी फिल्टर मुख्य पावर कर्डमा। तिनीहरू हीटर र ट्याks्कको पाइपमा जोनहरूमा पनि स्थापना गर्न सकिन्छ, तर यो एक समाधान हो जब मात्र मुख्य कनेक्शनमा पहुँच सम्भव हुँदैन।
यो नियामक पहिले र पछाडि माउन्ट गरिएको छ बन्द-भल्भहरू, यसको सेटिंग र पछिको मर्मत सक्षम गर्दै। उपकरण ठाडो रूपमा स्थापना गरिएको छ।
यो पनि हेर्नुहोस्: पानी इलेक्ट्रोलिसिस
पानी प्रेशर रिडुसर पानी प्रणालीको बिभिन्न ठाउँमा स्थापित गर्न सकिन्छ:
केन्द्रीय सम्मेलन - पानी मीटर पछि, मुख्य भल्भ र फिल्टर मुख्य पावर कर्डमा। स्थापनाको बखत, नियामक पछाडिको प्रवाह शान्त गर्ने सेक्सनको बारेमा र प्रणाली फ्ल्यास पछि नियामक स्थापना गर्ने बारे सम्झनुहोस्। सम्पूर्ण प्रणालीको लागि बेस प्रेशर सेट गर्नाले पानी बचत हुन्छ।
क्षेत्र विधानसभा - बन्द पानीको हीटर र भण्डारण ट्याks्की को आपूर्ति लाइनहरु मा, जब पानी को चाप रिड्यूसर स्थापना को उद्देश्य संचालन दबाव मा उतार चढाव को स्थिति मा सुरक्षा वाल्व खोल्न बाट जोगिनु छ। यो हीटर सक्रियता को आवृत्ति कम गर्न अनुमति दिन्छ।
विचलित - केवल बायलर स्थापना क्षेत्रमा र एक साथ थर्मोस्टेटको साथ टाउकोको एक साथ प्रयोगको साथ। प्रेसर ब्रिजको घटना यहाँ देखा पर्न सक्छ जसले सुरक्षा भल्भको अनसेलिंगको कारण गर्दछ। यस्तो अवस्थामा दबाब कम गर्नेहरूले तातो र चिसो पानीको बहावलाई नियमित गर्नु पर्छ।
- आपूर्ति प्रणालीमाउदाहरणका लागि अग्लो बिल्डिंगहरूमा, प्रेशर बूस्टर प्रणालीहरू मार्फत जहाँ अधिक दबाव क्षेत्रहरू आवश्यक हुन्छ। पानीको चाप कम गर्नेहरू प्रयोग गरिन्छ जब सिस्टममा आरामको दबाब bar पट्टी भन्दा बढी हुन्छ वा सुरक्षा वाल्भ (उदाहरण: एक पानी हीटर) को अपस्ट्रीम जब यसको खोल्ने दबावको %०% बढी हुन्छ।
पाइपमा पानीको चाप पानी स्थापनामा समावेश यन्त्रहरू र प्रणालीहरूको क्षमताहरूमा समायोजित गरिनु पर्छ। पानीको चाप धेरै नै छ प्रणालीमा क्षति वा खराबीलाई निम्त्याउन सक्छ, त्यसकारण पानी प्रणालीमा पानीको चाप कम गर्ने यन्त्र स्थापना गरिएको छ।
प्रत्येक रिडसरको कार्य तत्त्व एक विशेष हो झिल्ली पानी प्रेशर रिड्यूसरले पानी प्रणालीमा कसरी काम गर्दछ भनेर जिम्मेवार।
जब धेरै बलियो पानीको जेटले कार्य गर्दछ रिडक्ट्टरमा झिल्ली, वसन्त हटाइन्छ, जसले मोहर बढाउँछ र आवश्यक पानीको दबाव प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। जब दबाव सेट स्तरभन्दा तल झर्छ, वसन्त झर्छ, पानी बग्न अनुमति दिँदछ।
त्यहाँ बजारमा प्रयोग हुने विभिन्न, प्राय: जटिल, तर समाधानहरू हुन् rपानीको चाप eductor परिचालन सिद्धान्त प्रत्येक अपरिवर्तनीय छ: डायाफ्राम, सील र भल्भ सँगै आउटलेट प्रेशरलाई सुरक्षित स्तरमा राख्न कार्य गर्दछ।
प्राय: पानीको चाप रिडुसरको खरीद आवश्यकता भएको हुन्छ, किनभने यसको प्रयोगले पानी प्रणालीलाई ओभरप्रेशरको कारण हुने विफलताबाट बचाउँछ र प्रणालीमा पानी घाटा कम गर्ने एउटा तरिका हो।
यो पनि हेर्नुहोस्: पानी नरम
पानीको चाप रिड्यूसर प्रयोग गरिन्छ जब:
प्रणाली अपरेटिंग दबावले अनुमति मान भन्दा बढि छ
सुरक्षा भल्भको प्रेस अपस्ट्रीमले ve०% भल्भ खोल्ने दबाव भन्दा बढि छ
आवधिक स्थापना को उपयोग अस्थायी overpressure को जोखिम पैदा गर्न सक्छ
स्थापनामा आराम दाब bar पट्टी भन्दा बढी छ
पानीको चाप नियामकर्ताहरू वांछनीय छन् जहाँ विद्यमान नेटवर्क दबाव (पानी आपूर्ति) बोट वा उपकरणका लागि धेरै उच्च छ वा आवधिक उतार चढावको बिषय हो।
यो पनि हेर्नुहोस्: रिवर्स ओस्मोसिस
बिक्रीमा तपाईं विभिन्न डिजाइनका उपकरणहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ र बिभिन्न सामग्रीबाट बनेका:
कार्ट्रिज (कारतूस) रिडुसर योसँग काँसाको शरीर छ र एक जाल फिल्टर र छाप सहित एक टुक्रा कार्ट्रिज। यस डिजाइनले सफा गर्नको लागि सुरक्षात्मक जालको साथ घुसाउनको लागि अनुमति दिन्छ। सम्पूर्ण पानीको चाप कम गर्ने संयन्त्र कारतूस भित्र छ त्यसैले रखरखावले दबाब सेटिंग परिवर्तन गर्दैन।
स्टेनलेस स्टील रिमोटर्स तिनीहरू ब्रास कम गर्नेहरू भन्दा क्षय प्रक्रिया प्रति कम प्रतिरोधी छन्। पछिल्लोहरू अधिक महँगो छन्, तर उच्च पानी उपभोगको साथ राम्रो प्रदर्शन गर्दछ।
१ ईन्च पानीको चाप रिड्यूसर, ¾ रिड्यूसर वा १/२ पानीको चाप रिड्यूसर आपूर्ति पाइपको व्यासको आधारमा चयन गरिएको छ। सानो रिडरको स्थायित्व ठूलाहरूसँग उस्तै हुन्छ, र सही रूपमा चयनित तिनीहरू धेरै वर्षसम्म रहन्छन्।
फिल्टरको साथ पानीको चाप कम गर्ने यो अन्य फिल्टरहरु बिना स्थापनाहरुमा एक धेरै राम्रो समाधान हो। प्रयोग गरिएको प्रत्येक फिल्टरले मेकानिकल क्षतिको बिरूद्ध स्थापनाको सुरक्षा गर्दछ र यदि यो बिग्रिएको छ भने पनि, रेड्यूसरको प्रतिस्थापन सम्पूर्ण पानी स्थापनामा असफलता हटाउन वा यसमा सञ्चालित उपकरणहरूलाई बदल्नु भन्दा सजिलो र सस्तो हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि नियमित सफाई पानीको चाप रिड्यूसरको अपस्ट्रीम फिल्टर जालको साथ गरिन्छ।
पानीको दबाव प्रेषक अन्तर्निर्मित वा बाह्यले यसलाई प्रयोग गर्न सजिलो बनाउँछ र पानी प्रणाली प्रयोग गर्ने सुविधालाई बढाउँदछ, पानी प्रणालीमा वास्तविक दबावको छिटो पढी दिन्छ।
फिल्टर र प्रेशर गेजको साथ पानीको दाब घटाउने एक व्यापक समाधान र प्रयोग गर्न धेरै सुविधाजनक छ।
नियामकर्ताहरूको सस्तो मोडेलहरूमा एक कारखाना प्रिसेट दबाव हुन्छ। यदि तपाईं अधिक महँगो पानीको चाप रिड्यूसर छनौट गर्नुहुन्छ भने, तपाईं यन्त्रको प्यारामिटरहरू आफैं समायोजन गर्न र परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ।
यो पनि हेर्नुहोस्: पोइडेको
4.8 /5( 25 वोट )
कास्टोरमा पानी प्रेशर रिड्यूसरकसरी पानीको दाब कम गर्ने काम गर्दछकसरी पानीको चाप कम गर्ने सफा गर्नेकसरी पानी प्रेशर रिडुसर समायोजित गर्नेकसरी एक पानी को दबाव रिडुसर स्थापना गर्नेके पानी दबाव दबावपानी को लागी दबाव दबावपानीको चाप कम गर्नेपानीको दबाव कम गर्ने १ ईन्च१/२ पानीको चाप कम गर्ने१/२ ईन्च पानीको चाप कम गर्ने२ ईन्च पानीको चाप कम गर्ने१/२ पानीको चाप कम गर्नेPressure/3 पानी प्रेशर रिड्यूसर प्रेसर गेजसँगकास्टोरमा पानी प्रेशर रिड्यूसरपानीको चाप कम गर्ने मूल्यसफा पानीको दाब कम गर्नेसिंचाई पानीको दाब कम गर्नेपानीको चाप कम गर्ने हर्जपानीको चाप कम गर्ने हर्ज समीक्षाहनीवेल पानीको दाब कम गर्नेहनीवेल पानीको चाप कम गर्ने म्यानुअलपानीको दबाव कम गर्ने निर्देश पुस्तिकापानीको चाप रिड्यूसरले कसरी काम गर्दछपानीको चाप रिड्यूसर कसरी समायोजित गर्नेपानीको दबाव कम गर्ने तरिका कसरी सेट गर्नेleroy मर्लिन पानी दबाव दबाव कमीकर्तापानीको चाप रिड्यूसर ओबीआईपानीको दबाव कम गर्ने समायोजनफिल्टरको साथ पानीको चाप कम गर्नेफिल्टर र प्रेशर गेजको साथ पानीको दाब घटाउनेपानीको दबाव प्रेषकपानीको चाप कम गर्ने काम गर्ने सिद्धान्त